Korea Avaratra nandao ny fizahantany? Basy fitiliana afo
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Korea Avaratra nandao ny fizahantany? Basy fitiliana afo
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny mpitarika Koreana Tavaratra Kim Jong Un androany dia nanatri-maso ny fandefasana fitsapana karazana fitaovam-piadiana mitarika taktika vaovao.
Nilaza ny masoivohom-baovao foibe koreana fa ny filoham-pirenena Kim Jong Un dia nandinika ny fandefasana ny fitaovam-piadiana tamin'ny Alarobia nataon'ny Academy of Defense Science.
Araka ny tabloid an'ny Global Times ao Beijing, Korea Avaratra dia maniry ny hampiadana ny fizotran'ny fizahan-tany satria maro ny vahiny mandeha any amin'ny firenena.
Notaterin'ny masoivoho fa nilaza i Kim fa “ny fampivoarana ny rafitry ny fitaovam-piadiana dia hetsika iray manan-danja tokoa amin'ny fampitomboana ny herin'ny ady amin'ny Tafiky ny Vahoaka.”
Nilaza ilay masoivoho fa nametaka lahatsoratra iray i Kim mba hianatra momba ny afo-fitsapana ilay fitaovam-piadiana mitarika taktika vaovao ary hitarika ilay afo-hitsapana.
Ny fanambarana dia tonga taorian'ny tatitra momba ny hetsika vaovao tao amin'ny foibem-pikarohana balafomanga Koreana Avaratra sy ny toerana lava rokety lava izay inoana ny Avaratra fa hanangana balafomanga lava mikendry ny tanin'ny Etazonia.
Nilaza ny Trano Fotsy fa nahalala ny tatitra izy ary tsy nisy ny heviny.